Yakanakisa mijaho yemotokari mitambo yePC | Gadget nhau
Yakanakisa mujaho mota mitambo yePC
Rudzi rwekutyaira rwakagara rwuri rwevanozivikanwa pakati pevatambi, asi mumakore gumi apfuura rakapfuura mukuzivikanwa nemitambo yekuita senge Battleroyale seFortnite kana MOBA senge lol. Asi kune vazhinji vedu vanofarira kutyaira mitambo, ingave arcade kana yekunyepedzera, sezvo ivo vachitibvumidza kumhanya uye kukwikwidzana nemotokari dzataisagona muhupenyu chaihwo. Kunakidzwa kwevose vanoda mota.
Mhando dzazvino dzemazita uye kuwanda kwavo kwemabhuku kushoma, asi isu tichine katarogu yakakura yemitambo yeiyi yakapfuma genre. Vatambi vakasarudzika vanowanzo tarisa mitambo uko kunzwa kwekumhanyisa, kurerukirwa kwekubata, kudyidzana nemhoteredzo uye mukana wekuparadza anokwikwidza anokunda nekunetseka kwakananga. Kune rimwe divi, ivo vanonatsa kwazvo vanotsvaga simulation apo mutambi anopiwa mubairo wekugadzira mabhureki akakwana kugadzirisa nguva. Muchikamu chino ticha taura kuti ndezvipi kwatiri mitambo yakanakisa yemhando yemijaho paPC.
1 Mujaho mitambo yekuenzanisa
2 Arcade kutyaira mitambo
2.2 Tsvina 4
2.3 Chido Chekumhanyisa: Kutsvaga Kupisa Kwakadzoserwa
2.4 Kupisa KweParadhiso Yakadzokororwa
Mujaho mitambo yekuenzanisa
Ndizvo zve chikamu chechitatu mune imwe yeindasitiri yakanyanya kumhanya yevhidhiyo mutambo saga. Inokwanisa kutambanudza kushushikana kwakanyanya, manzwiro uye kunakidzwa kwakawanda munyika ine simba yekumota kuburikidza neshanduko dzakakosha mukutaura kune zvayakatakura yapfuura.
Iwo masimba akagadziriswazve zvachose, zvichikonzera kukurumidza-kumhanya, kunakidza uye chaizvo chaiyo yekutyaira system. Isu tinowana hunyanzvi marongero emhando dzese dzevatyairi vendege, kubva kune akanyanya veteran uye nyanzvi kune vasina hunyanzvi uye vasina kujairika. Mamiriro ekunze anochinja munguva chaiyo izvo zvinopa hupfumi hwakawanda mukudyidzana nemhoteredzo uye zvinowedzera kukosha pasarudzo yemagadzirirwo nematai atinoita emota yedu yekumhanya. Mune ino shanduro isu tichava nemhando yakakura yemitambo modes senge inverse zvachose uye yakadzika trajectory modhi iyo inofadza ivo vanonyanya kuita-vatambi.
Dzvanya iyi link kana iwe uchida kutenga Project Cars 3
Pasina kupokana rimwe remazita makuru mune emhando yekumhanya uye mota simulation, yakasarudzika neiyo Blackpain GT akateedzera rezinesi. Izvo zvinotibvumidza isu kusangana nemakwikwi anonakidza neichoicho uye kudzika kusati kwamboonekwa kare. Tinogona kukwikwidza kubva kwauri kuenda newe hupenyu chaihwo vatyairi vepamutemo, ese zvikwata zviri pamutemo uye dzese mota dzekumhanyisa pagridhi.
Isu tinowana akasiyana siyana maseketi chaiwo akadzokororwa kusvika kumamirimita nemainjiniya akanakisa nekuda kweiyo graphic injini Unreal Injini 4. Pasina mubvunzo imwe yezvakanakisa kutyaira simulators pamusika, iyo inokunda yakazara kana tichiinakidzwa nayo mudhiraivho wakanaka, watinogona kuona nawo kukanganisa kweasphalt, izvo zvinoita kuti ruzivo rwedu rwekutyaira ruwedzere kuitika.
Microsoft simulator, yakagadzirwa naTendeuka 10, yakwanisa kuchengetedza izvo zvinotambika zvinodiwa uye iko kwechokwadi kwakazvizivisa kubva pakutanga kwayo. Huru hutsva hweichi chikamu inzira yakadzika yemushandirapamwe nemakwikwi emakwikwi uye nehungwaru hwekunyepedzera mumhandu dzedu dzakakodzera kutaurwa, yakanyanya kuvandudzwa kutonga kwekubata kwayo nemurairo.
Imwe poindi yekurumbidza ndeyehunyanzvi chikamu, chimwe chinhu chinoshamisira kana tichigona kutamba pa4K uye 60FPS. Padanho remukati harisi kure kumashure, rine zvinopfuura 700 kukuvara uye 32 maseketi inowanikwa, mutambi akazara kwazvo akazara nezviitiko zvenguva pfupi. Pasina mubvunzo imwe yeanongedzo eiyo genre, kunyangwe kutamba nemutungamiriri kunofadza nekuda kweiyo kuvandudza kutongaIsu tinogara tichikurudzira kutamba neyakanaka shuttlecock.
Dzvanya pane iyi link kuti utenge Forza MotorSport 7
Imwe yeanonyanya kudhira simulators mumhando yekutyaira, ichokwadi uye yakanangana nemakwikwi epamhepo. Iine tarenda yekudzora iyo ine inorema nhanho yeiyo chaiyo inobvumidza iyo huru yekutyaira vanofarira kunakidzwa kwakaoma kutyaira. Sezvatakambotaura kare, zveizvi zvichange zvakakosha kuti uve nedhiraivhi yakanakaSemitambo yapfuura, iRacing inokwanisa kufambisa zvese zvinoitika pane asphalt kuburikidza nedhiraivho.
Pasina mubvunzo chinhu chinonyanya kushamisa cheiyi simulator ndeyayo yemakwikwi online nzira, sezvo ichisanganisira kukwikwidza rezinesi rinoongorora danho redu rekutyaira uye maitiro edu munzira, kuti tiwane isu vakwikwidzi vakakodzera kuti titarisana. Musoro une rakakura repertoire remota uye huwandu hwenzvimbo dzinowanikwa kumhanya. Marezinesi epamutemo senge maawa makumi maviri nemana eLeMans, Ratidza kana Nascar. Pasina mubvunzo imwe yeanozara uye anodzvinyirira PC simulators.
Kupedzisa nerunyorwa urwu rwechokwadi simulators, ngatiendei pamwe chinhu chepedyo kune nyanzvi simulator, chirevo chinokwezva avo vanoda kurarama ruzivo rwakafanana nekumhanya padunhu chairo. Chikamu chakashata cheizvi zvese ndechekuti vatambi vane hunyanzvi vashoma vanogona kunetsekana kana zvasvika pakuva seri kwevhiri neiyi simulator, pamusoro pechimwe chipfupi interface uye injini yemifananidzo isingatarise yakaipa asi isina kupenya kupfuura kukwikwidza kwayo. Vagadziri vacho pasina mubvunzo vakabhadhara zvakanyanya kune fizikisi uye kwechokwadi kunoendeswa nedhiraivho uye marongero ayo.
Iwo akasimba mapoinzi eiyi simulator hapana mubvunzo kuti ndeyechokwadi sezvatakataura uye huwandu hwegadziriro parameter mune marongero emota dzedu. Shanduko yemamiriro ekunze inozochinja zvachose kutonga kwemotokari dzedu, kutimanikidza kumisikidza zvese zvakare uye tichida zvakatowanda kubva pavhiri. Pasina kupokana, maitiro ayo epamhepo haasati ari kumashure sezvo nharaunda yacho iri hombe uye zvinonakidza kwazvo kukwikwidza kugadzirisa mazuva ese.
Arcade kutyaira mitambo
Inotarisirwa kune vateereri vasina kujairika, Microsoft yakaburitsa ruoko rwayo izvo parizvino inonyanya kufarirwa mutambo wekutyaira. Mutambo uyo unotiisa munyika yakavhurika apo patinogona kufamba takasununguka tichityaira mota dzedu dzichiita mhando dzese dzematambudziko kana zvinangwa, pamwe nemadzinza ane vanopikisa online. Pfungwa dzayo dzakasimba pasina mubvunzo ndiyo nyika yambotaurwa yakavhurika, mifananidzo yayo inoshamisa uye mwero wekugadzirisa mota yadzinayo. Kudzora chinhu chatisingakwanise kukanganwa kana kubvira inomira pane imwe nzvimbo pakati peiyo yakachena arcade uye isinganetsi simulation.
Pasina kupokana, mutambo uyu wakaratidza pamberi nepashure, uchitora mareferenzi kubva kuKuda kweKumhanya kana Midhi Kirabhu, matiri kunakidzwa nemepu huru yataimhanya tichiita zvakasununguka mabasa, mamishini kana nhangemutange. Mutambo unonakidza uko mukuwedzera pakukwikwidza, isu tinogona zvakare kuzorora nekungotora kukwira, kuwana zvinetswa zvekumhanyisa nekuvhuvhuta ma radar panzira huru. Mhando dzakasiyana dzemotokari hombe, kubva kunoshandira, offroad kana mota dzemitambo yepamusoro.
Dzvanya iyi link kana iwe uchida kutenga Forza Horizon 4
Mune rondedzero yemitambo yekutyaira yakanakisa isu hatigone kukanganwa iyo inonakidza nyika yeiyo rally uye zviri pachena kuti ndeimwe yeakanyanya kunaka uye anonakidza ekutyaira modhi. Ichi chinyorwa chinochengetedza chiyero chakakura pakati pekuda uye kunakidza, kubvumira chero mutambi ane imwe tsika kuti afare asinganyanye kunetseka.
Maitiro epamhepo akawedzera zvakanyanya neesimba sisitimu yemaligi nematambudziko, kunyangwe iyo nzira yemushandirapamwe yave iri kumashure nekuda kwekushayikwa kwayo kwakadzika. Chiitiko cheDIRT 4 chakapfupikiswa mukunakidzwa uye kuchidawo zvakaenzana, izvo zvinoita kuti uve mutambo wakakosha kune avo vanotsvaga mutambo wemotokari wavanowana nguva yakanaka vari vega nepamhepo.
Dzvanya pane iyi link kuti utenge DIRT 4
Chido Chekumhanyisa: Kutsvaga Kupisa Kwakadzoserwa
Mambo weArcade kutyaira aigona kunge asipo pane ino runyorwa uye ndezvekuti Kudikanwa kwekumhanyisa pasina mubvunzo kuri pachayo kwakakodzera imwe yeakakosha sagas yemhando iyi. Uyu mutambo wevhidhiyo unofambisa zvese zvakakosha izvo saga zvave zvichitumira kwatiri kubvira kutanga kwayo makore makumi maviri apfuura. Grafiki dzinoshamisa pamwe chete nemutambo wekunakisa wechero mhando yemitambo inoita kuti kuseri kwemavhiri emota dzakasiyana siyana kunakidze.
Mutambo unozvirumbidza zvinoshamisa Mapurisa anodzingirira mumigwagwa mikuru murefu pamepu hombe. Zvichiri kunakidza sezuva rekutanga kuenda kuseri kwegumbo uye ita ako akasiyana mamishinari achiperekedzwa neruzha uye runonakidza rwiyo. Mutambo uyo waunofanira kuedza kana usati wambozviita, uchishandisa mukana wekutanga zvekare.
Dzvanya pane iyi link kana iwe uchida kutenga Inodiwa Yekumhanyisa: Kupisa Kutsvaga
Kupisa KweParadhiso Yakadzokororwa
Imwe ngano arcade yekutyaira saga iyo yaigona kushaikwa kubva pane urwu runyorwa. Kuburitswa kwazvino kwesaga iri nefaelift inoita kuti iwedzere kukwezva kana zvichibvira, kunyange iri kure neyazvino graphic standard, ine chikamu chinoyevedza chinoyevedza uye inochengetedza kutamba kwayo kwakanakira. Kupwanya supercar yedu uye nekuisiya zvachose zvakaipa hakuna kumbove kwakanyanya kunakidza.
Kunakidzwa mutambo ne kubata kuri nyore kwatinongofanira kunetsekana nekupedzisa munzvimbo yekutanga, kuyedza kuti vatinokwikwidza varume guruva kuburikidza nekurovera. Iyo ruzha runoperekedza iyo frenetic kumhanya kwayo Gameplay ine isingakanganwike uye inverse madingindira ayo anotikumbira isu kuti tiwedzere kumhanyisa. Nyika yaro yakavhurika izere nemamishini uye zvinangwa zvinofanirwa kuzadzikiswa, pamwe nezvakavanzika zvekuburitsa, pasina mubvunzo zita rakanakisa mune ino saga iyo inofanirwa kutamba zvakare.
Dzvanya pane iyi link kuti utenge Burnout Paradise
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Musha » videogames » Yakanakisa mujaho mota mitambo yePC
Chinoorora chinoshamisa, kana iwe uchikwanisa kupinda vracing.com.ar akanakisa simulators!
iPhone 12 Pro VS Huawei P40 Pro, ndeipi ine yakanakisa kamera?
Huawei FreeBuds Pro, imwe nzira kune iyo AirPods Pro yataive takamirira